I-Old Town Comfort 1 ngu-Irini - I-Airbnb
I-Old Town Comfort 1 ngu-Irini
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Fotis
U-Fotis Ungumbungazi ovelele
Njengoba isanda kuvuselelwa maqondana nezidingo zesimanje zezivakashi zethu, amafulethi ethu aqhubeka nesiko leminyaka engu-40 lokwamukela izivakashi endaweni. Itholakala e-Old Town, inhliziyo yengxenye ejabulisayo ye-Kos Town, banelungelo lokusondelana nazo zonke izindawo eziyinhloko ezithandwayo njengezindawo zezokuthutha, izindawo zemivubukulo, zonke izinhlobo zezitolo - amathilomu - izindawo zokudlela - izimakethe ezincane njll. Konke ebangeni lemizuzu engu-5 yokuhamba ngezinyawo.
I-One Bedroom Apartments engamukela abantu abadala abangu-3 + usana olu-1 olufika eminyakeni emi-2 ubudala, elinazo zonke izinsiza zesimanje kanye nefenisha entsha sha ukuze kwandiswe ukunethezeka nokuphumula kwezivakashi zethu endaweni ehlanzekile necwebezelayo.
Indawo yakithi iyingxenye yomlando yedolobha lapho umuntu engamangala khona izinto zakudala ze-Classic and Hellenistic Era, ahambe emagcekeni aphithizelayo esitolo sezikhumbuzo futhi ahlole namathuba okuthenga emigwaqweni ephithizelayo yezentengiselwano.
UFotis Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 1189156
Hlola ezinye izinketho ezise- Kos namaphethelo